मेलबोर्नमा डिजिटल मार्केटिंग - प्रवृत्ति जुन २०२१ मा विकसित हुनेछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2021B बजार समाचार
जनवरी 20, 2021 जनवरी 19, 2021 डेभिड जोन B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
२०२० पूरै विश्वभरको लागि अविस्मरणीय वर्ष हो किनकि महामारीले हामीलाई कठिन रूपमा सतायो।
अधिकांश व्यवसायहरू, संस्था, आदि, डिजिटल मिडिया मार्फत घरबाट सञ्चालन भइरहेको थियो।
एआई सबै चीजको भविष्य हो र लगभग सबै व्यापार प्रक्रिया र मार्केटिंगमा पनि देखिने छ।
महामारीले विश्वभरि हजारौं नयाँ सिर्जनाकर्ताहरूलाई पनि जन्म दियो जसले अन्ततः उनीहरूलाई गर्न मनपराउने काम गर्न आवश्यक ब्रेक पाए। यस्तो परिदृश्यमा, डिजिटल मार्केटिंग कम्पनीहरूले धेरै फाइदा पनि गर्‍यो किनकि अनलाईन डाटा उपभोग पहिले भन्दा बढी भयो।
डिजिटल मार्केटिंगको भनाइहरू जान्नु महत्वपूर्ण छ यदि कसैले यसलाई इन्टरनेटमा ठूलो बनाउन चाहन्छ भने। मेलबोर्नमा डिजिटल मार्केटिंग धेरै पक्षहरूको सम्झौता गर्दछ, र यदि एक खेल सही खेल्छ, विकास ग्यारेन्टी छ।
डिजिटल मार्केटिंग भनेको के हो?
नामले संकेत गरे जस्तै डिजिटल मार्केटिंग भनेको अनलाइन मार्केटिंग डिजिटल टेक्नोलोजीहरू र उपकरणहरू जस्तै डेस्कटप कम्प्युटर, मोबाइल फोन, र अन्य डिजिटल मिडिया प्लेटफर्महरूमा आधारित छ। यो मार्केटिंगको एक अंश हो जहाँ अनलाइन मिडियाको मद्दतले उत्पाद वा ब्रान्डको प्रचार गरिन्छ। यो मार्केटिंग टेक्निक हो ग्राहकलाई ईमेल, सामग्री मार्केटि,, खोज प्लेटफर्महरू र मार्फत आकर्षित गर्न सामाजिक संजाल.
डिजिटल मार्केटिंगमा के प्रचलन आयो?
टेक्नोलोजी यति छिटो विकसित भएको छ कि यो क्षेत्रमा नयाँ प्रवृत्ति र कार्यनीतिहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। २०२० को पूरा वर्ष डिजिटल सेवाहरू र इन्टरनेटद्वारा सञ्चालित थियो, जसले हामीलाई वास्तवमै हाम्रो भविष्य कसरी व्यवसाय र ब्रान्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हुनेछ भन्ने बारे एक धारणा दिएको छ। २०२१ मा डिजिटल मार्केटिंग केही भविष्यका र ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कम न्यून तरीका हुनेछ।
Media०% भन्दा बढि श्रोताहरू सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत उत्पादनहरू तर्फ आकर्षित भएका छन् किनकि यो समस्याबाट मुक्त र पहुँच गर्न सजिलो छ।
पूर्वानुमान प्रवृत्तिहरू जुन आउँदो दशकमा विकसित हुने र अनुकूलित हुने सम्भावना छ:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई): एआई सबै चीजको भविष्य हो र लगभग सबै व्यापार प्रक्रिया र मार्केटिंगमा पनि देखिने छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्राहक व्यवहार र खोज ढाँचा अनुसार काम गर्दछ। यसले विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू र ब्लग पोष्टहरूबाट डेटा सlects्कलन गर्दछ, जसले कम्पनीहरूलाई ग्राहकहरूले उनीहरूको मनपर्ने उत्पादनहरू वा सेवाहरूको लागि कसरी खोजी गर्दछन् भन्ने बारे विचार दिन्छ।
शपबेबल पोष्टहरू: आजकल, सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू प्राय: सबै चीजको लागि एक च्यानल बनेको छ। यो कुराकानी गर्न केवल एक प्लेटफर्म मात्र होइन यसमा विभिन्न पोष्टहरूमा संलग्न लिंकहरू मार्फत चीजहरू पनि पसल गर्दछ। 60०% भन्दा बढि श्रोताहरू सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत उत्पादनहरू तर्फ आकर्षित भएका छन् किनभने यो समस्याबाट मुक्त र पहुँच गर्न सजिलो छ।
आवाज खोजी: भ्वाइस खोजीको सुविधाको साथ कुनै पनि प्लेटफर्मको सामग्रीलाई अनुकूलन गर्न अपरिहार्य छ। आज, मानिसहरू सजिलैसँग काम गर्न मनपर्दछ र स्मार्ट घर उपकरणहरूमा ह्यान्ड्स-फ्रि खोज्न रोज्छन्। यस्ता विश्लेषणलाई दिमागमा राख्नु पर्छ। यो प्रवृत्ति, वास्तवमा, खोज प्रवृत्तिमा एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पैदा गर्दछ।
भिडियो बजार प्रवृत्ति: लगभग most०% दर्शकहरूले यसलाई खरीद गर्नु अघि उत्पादको अनलाइन भिडियो हेर्छन्। भिडियो सामग्रीले ब्रान्ड / उत्पादनको बारेमा तुलनात्मक रूपमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ र यसको लागि जाने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यो बजार मा रहन यो प्रवृत्ति अनुसरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाइँको उत्पादन को एक अप्रत्यक्ष बिक्री को जस्तै छ। धेरै ब्रान्डहरू प्रभावकारीहरूसँग मिलेर काम गर्दछन् जसले भिडियो मार्केटिंग सामग्री बनाउन राम्रो सामाजिक पहुँच पाउँदछन्। २०२१ सबै त्यस्ता डिजिटल प्रभावकारीहरू मार्केटमा लिने बारे हुनेछ।
भर्चुअल रियलिटी टेक्नोलोजी: जीवन छिटो भएको छ, र मानिसहरू व्यस्त भएका छन्। तिनीहरू पसल वा शोरूम शारीरिक किन्न जान्छन् वा उत्पादनको बारेमा जान्नको लागि समय र प्रयास गर्दैनन्, र यही कारण यो छ कि एआर र वीआर कार्यमा आउँदछ। व्यक्तिहरू अब उत्पादन किन्न अघि परिणामहरू अनुकूलित र दृश्य बनाउँदछन्। VR ले तपाईंलाई आधारभूत विचार प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ कसरी कुनै खास चीज तपाईंलाई शारीरिक रूपले हेर्नेछ तर भर्चुअल मीडियमको माध्यमबाट। यो कम्प्युटरले उत्पन्न वातावरण हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले यसमा वातावरण, दृश्यहरू, र वस्तुहरूको साथ डुबाएको महसुस गर्दछन्। यसले छविहरू, ध्वनिहरू, आदि मार्फत निर्माण गरिएको एउटा कृत्रिम विश्व सिर्जना गर्दछ, जहाँ व्यक्तिले आफूलाई पूर्णतया डुबाउन सक्छ। VR चिकित्सा, संस्कृति, वास्तुकला, शिक्षा, आदि जस्ता क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग गरीन्छ।
संवर्धित वास्तविकता (एआर): उही एआरको साथ जान्छ, जसले स्मार्टफोन क्यामेराको साथ स्थानको दृश्य उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूको उत्पादनले त्यो खास स्थानमा कसरी देखाउँदछ। एआर सँधै VR को साथ गलतफहमी भएको छ, र कहिलेकाँही यो स्पष्ट पनि हुँदैन। एआरमा, हाम्रो विश्व रूपरेखा बन्छ, र वस्तुहरू, छविहरू वस्तुतः राख्न सकिन्छ। यस टेक्नोलोजीको साथ, डिजिटल विश्वको कम्पोनेन्टहरू वास्तविक विश्वमा व्यक्तिहरूको धारणासँग मिल्दछन्। एआर हाम्रो वरिपरिको प्राकृतिक वातावरण बृद्धि गर्न प्रयोग गरिन्छ कम्प्युटर दर्शन जोडी, जुन डिजिटल रूपले अन्तर्क्रियात्मक अन्तरिक्ष सिर्जना गर्न उत्पन्न गरिएको हो।
सामाजिक सन्देश अनुप्रयोगहरू: सामाजिक सन्देश अनुप्रयोगहरू जस्तै व्हाट्सएप, वेच्याट, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम डीएमहरूले मानिसहरूलाई सम्पर्कमा राखेका छन्। त्यस्ता सन्देश अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ र संचारलाई सजिलो बनाउन सक्दछ। धेरै सामाजिक सन्देश अनुप्रयोगहरूले त्यस्ता अनुप्रयोगहरूमा ब्यापार निर्माण गर्न र व्यापारीहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरू नजिक ल्याउन मद्दतको लागि ब्यापार खाताहरू उपलब्ध गराउन शुरू गरेका छन्।
G जी टेक्नोलोजी: मोबाइल टेक्नोलोजीको पाँचौं पुस्ताले २०२० मा थोरै संकेत छोडेको छ। आउँदो दशक डिजिटल संचारको नयाँ युग हुनेछ। G जी गतिले बढ्दो वास्तविकता उद्योगलाई बढवा दिनेछ र आभासी हेड-अप प्रदर्शनको पूरै नयाँ संसार ल्याउनेछ। G जी टेक्नोलोजीले परिवर्तन गर्दछ कि हामी कसरी सबैको लागि इन्टरनेट उपभोग गर्छौं, औसत प्रयोगकर्ताहरूदेखि डिजिटल मार्केटरहरू। जीजीको उच्च-स्पीड नेटवर्कले विश्वलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा जडान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, ग्रामीण उपभोक्ताहरूका लागि पनि, जसले डिजिटल बजारको समग्र बृद्धिमा मद्दत गर्दछ। यसले व्यवसायमा स्थानीय व्यक्तिलाई उनीहरूको उपभोक्ताको नजिक हुन मद्दत गर्दछ र वस्तुतः जडित समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
मार्केटिंग रणनीतिहरू विकसित हुँदै जान्छ र समयको साथ परिवर्तन हुँदै जान्छ। मेलबोर्नमा डिजिटल मार्केटिंगले यस प्रवृत्तिलाई अपनाउँदै वरपरका व्यवसायहरूको बिकासलाई बढावा दिईएको हेर्न सक्दछौं।
सांप्रदायिक समाचार डिजिटल मार्केटिङ एसईओ सामाजिक संजाल
म न्यूपाथ वेबको लागि एक प्रतिलिपि लेखक हुँ, एक पुरस्कार विजेता अष्ट्रेलियाली डिजिटल एजेन्सी र म यो साइटको लागि अनलाइन प्रमोशनमा काम गर्दैछु।